Mayelana NATHI - Sichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd.
ISichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd.
Le nkampani inabasebenzi abangaphezu kwekhulu, futhi amazwe angaphezu kwama-30 anokubambisana kwezinto zokwelapha ubhubhane. U-Yin Ye sekuyisikhathi eside egcina ukubambisana okuseduze namanyuvesi amaningi aziwayo kanye nezikhungo zocwaningo eChina, futhi uzibophezele ekubeni yiphayona kubuchwepheshe bokuvikela ubhubhane.
Inethiwekhi yezokumaketha neyensizakalo yezokwelapha yaseYinye ihlanganise zonke izifunda zomhlaba.Inhloso yenkampani "ukuThuthukisa iBiotechnology Nokuhlomula Ngempilo Yabantu" futhi "Ikhwalithi inquma impilo nokufa kwamabhizinisi, Amakhasimende anquma impumelelo noma ukwehluleka kwamabhizinisi, iThalente linquma ukuchuma kanye nokwehla kwamabhizinisi, kanti i-Innovation inquma ikusasa lamabhizinisi "njengenhloso yawo. Amanani ayisisekelo, ukuba umphakeli onokwethenjelwa kakhulu emhlabeni wemikhiqizo yezokwelapha.
Inkampani yethu isebenzisa ngokugcwele amazinga kazwelonke nawezimboni, ilawula ngokuqinile inqubo ngayinye futhi iqinisekisa ikhwalithi yengxenye ngayinye. Ngemuva kokuthengisa imikhiqizo kumakhasimende, sizokwenza uphenyo oluphelele ngemikhiqizo, bese sithuthukisa ubuchwepheshe nekhwalithi. Sithole nezitifiketi eziningi.
Sineqembu lokuthengisa eliqeqeshiwe, banobuchwepheshe obuhle kakhulu nezinqubo zokukhiqiza, baneminyaka eminingi yokuthengisa ekuthengiseni ukuhweba kwamanye amazwe, namakhasimende akwazi ukuxhumana ngokukhululekile futhi aziqonde ngokunembile izidingo zangempela zamakhasimende, enikeza amakhasimende insizakalo eyenziwe yaba ngeyakho nemikhiqizo ehlukile.
Le nkampani ineqembu elinamandla lokucwaninga ngesayensi, futhi ngaphezu kwe-30% yethimba lenkampani linamagama aphezulu eziqu zobudokotela kanye neziqu zobudokotela ... Sakha uphawu oluhamba phambili embonini. Khokha ukulingana okulingana, intengo ilingana nenani, futhi wenze abasebenzi, amakhasimende, abaninimasheya nabahlinzeki isimo sokuwina.